Cudur dilaa ah lagana qaado dadka cuna hilibka Daanyeerada & Shimbiraha oo Qaarada Africa ka dilaacay (Daawo Yaab+Warbixin) !! – idalenews.com
Cudur dilaa ah lagana qaado dadka cuna hilibka Daanyeerada & Shimbiraha oo Qaarada Africa ka dilaacay (Daawo Yaab+Warbixin) !!
Cudur dilaa ah loona waayay Daawo lagula dagaalamo ayaa ka dilaacay wadamo badan oo ku yaala Qaarada Africa gaar ahaan West Africa. Cudurkaan cusub oo lagu magacaabo Ebola waxaa asalkiisa keenay ama laga qaaday dadka cuna hilibka daanyeerada iyo Shimbiraha.
Halkaan ka Daawo cudur Dilaa ah oo Qaarada Africa ka dilaacay & dad badan oo wadnaha farta ku haya
Qofka uu asiibo cudurka Ebola waxaa qabaneysa Qandho daran iyo Murqo xanuun dhanka jirka ah ka dibna saacado yar ayuu ku dhimanayaa. Dhaqaatiir badan oo dhanka hay´adaha Qaramada Midoobay iyo beesha caalamka ka socda ayaa soo gaaray wadamada uu ka dilaacay cudurka (Ebola) balse ilaa hada looma hayo daawo lagula dagaalamo .
Cudurkaan oo dad badan cabsi ku abuuray ayaa iminka wuxuu soo gaaray kuna soo faafay wadamada Guinea iyo Liberia oo markii hore ka nabad qabay qabay, waxaana ilaa iminka u dhimatay cudurkaan shalay iyo maanta oo kaliyah dad ka badan 100-qofood.
DAAWOAfar Nin oo Tuugo Koonfur African ah oo habeen madow usoo dhacay Dukaan Soomaaliyeed oo jirkooda cad cad loo jarjaray Soomaali Geesiyaal ah oo Aarsaday.